Ambongadiny Custom Custom Heavy Didy Retractable Dog Leash orinasa sy mpamatsy | Kudi
Adidy mavesatra alika azo alain-tahaka
1.Tatotra azo sintomina dia tady kofehy malalaka. Ity famolavolana ity dia ahafahanao mihodina miverina am-pilaminana ny tady, izay afaka misoroka tsara ny fatoran'ny alika tsy mihodina sy mifatotra. Ary koa, io famolavolana io dia afaka mampitombo ny faritra misy ny hery amin'ny tady, manao izay hahatoky kokoa ny tady mahazaka, ary mahazaka hery misintona bebe kokoa, hahatonga ny fandidiana ho mora kokoa ary hitondra anao hampionona.
2.360 ° fividianana alika mavesatra maimaimpoana tsy misy tangle afaka miantoka ny alika hihazakazaka malalaka nefa misoroka ny olana ateraky ny fidiran'ny tady. Ny fihazonana ergonomika sy ny fametahana anti-slip dia manome fahatsapana fihenan-tena.
3. Ity misy dispenser kitapo fako poop azo entina maivana ary kitapo fako plastika 1 amin'ny tanany. Tsy tanana sy mora ampiasaina izy io. Io dia ahafahanao mankafy ny fahafinaretana amin'ny fandehanana.
Mandefa fanadihadiana Miresaka ankehitriny
Mainty sy fotsy na fanao
Tombony amin'ny fividianana alika azo alain-tahaka
Ny mekanisma fanidiana azo antoka dia manome antoka fa afaka manitatra sy misintona milamina ny kofehy. Tsindrio ny bokotra fametahana mba hamaky azy, ary alefaso ny bokotra hidin-trano handrosoana ny fehy. Raha te hamerina amin'ny laoniny ny toe-javatra maimaimpoana ianao dia solafaka mihemotra fotsiny ny bokotra. Ny mikorisa sy mihodina fotsiny amin'ny ankihibeninao ihany, mora sy azo antoka.
Sarin'ny Dog Dog Leash azo adidy mavesatra
1.Manao orinasa na orinasa mpivarotra ve ianao?
Izahay dia orinasa manokana amin'ny famokarana vokatra biby ho an'ny biby mandritra ny 20 taona.
2.Ahoana ny fomba hanaovana ny fandefasana?
RE: Amin'ny ranomasina na amin'ny rivotra noho ny baiko be dia be, fandefasana mazava toa ny DHL, UPS, FEDEX, EMS, TNT ho an'ny baiko kely.
Raha manana mpandraharaha fandefasana entana any Shina ianao dia afaka mandefa ny vokatra any amin'ny Agent China ianao.
3.Inona no fotoana itarihanao?
RE: Manodidina ny 40 andro eo ho eo. Raha manana ny vokatra ao anaty tahiry isika, tokony ho 10 andro izany.
4. Azoko atao ve ny maka ny santionany maimaim-poana ho an'ny vokatrao?
RE: eny, tsy maninona ny maka santionany maimaim-poana ary azafady azonao ny vidin'ny fandefasana.
5: Ahoana ny fomba fandoavanao vola?
RE: T / T, L / C, Paypal, carte de crédit sns.
6. Karazana fonosana inona avy amin'ny vokatrao?
RE: Tsy maninona ny manamboatra ny fonosana.
7.Afaka mitsidika ny orinasa misy anao ve aho alohan'ny filaminana?
RE: Azo antoka, tongasoa anao hitsidika ny tranonkalantsika, azafady, alaharo miaraka aminay mialoha ny fotoana.
Mitady ny fanontanianao an'ity Stainless Steel Comb Comb ity
Previous: Fialana alika azo averina Bungee fanampiny
Leash azo sintomina ho an'ny alika kely
Ambongadiny alika azo averina ambongadiny
Volom-borona alika mitaratra
Fialana alika azo averina Bungee fanampiny
Fiadiana amin'ny alika Oxford azo ovaina
Alika mavesatra alika azo averina